Ndingaite sei kutarisira tattoo yangu panguva uye mushure mekupora? | Kunyora
Ferdinand Prada | | Body Art, Noticias, Tattoos
Maitiro ekuchengeta uye kuchengetedza matattoos ndiyo yakanyanya kusimba uye yakakosha chikamu cheiyi hunyanzvi, sezvo isu tese tichida kuve nemataturu edu nguva dzose mamiriro akanaka, the anogara aine simba mavara y vatema kuti vanoramba vari inokwanisa kupinza kunyangwe kupenya kupenya. Asi zvinoitika kuti, kamwe mavanga kudhirowa, inotanga iyo inotyisa maitiro e kushanduka kuti kune vamwe kunotora makore uye kune vamwe ingori mwedzi.
Mukunyora nyora ndinoda kunyora nezve zvimwe mafuta uye kutarisira kuitira kuti ma tattoo edu arambe achishamisa uye achirarama kwenguva refu. Hatifanire kukanganwa kuti hunyanzvi hwehupenyu uye kuchengetedzwa uye kuchengetedzwa kunozvibvumira kuti zvigare zvakanaka.
1 Mhando dzezvizoro zvekutarisira iyo tattoo panguva yekupora uye nekuchengetedza iyo mushure mayo
1.1 Kuchengeta uye kugadzirisa panguva uye mushure mekupora
2 Dzimwe nzira dzekudzivirira
Mhando dzezvizoro zvekutarisira iyo tattoo panguva yekupora uye nekuchengetedza iyo mushure mayo
Mushure mekupedza kupenda ganda redu, tinokurudzira kushandiswa kwekirimu inobatsira kuporesa nekuchengetedza ruvara asi ...Ndeipi kirimu inoshanda zvakanyanya? Uyu mubvunzo unozvibvunzwa nevakawanda uye nekuda kweiyo nhamba huru yemhando izvo zviripo mumusika zvinogona kukurira, saka tinokuda batsira kuita kuti hupenyu hwako huve nyore zvishoma.
Kune atove kuzivikanwa Doro kana mvura-yakadzika makirimu izvo zvinotengeswa muma Pharmacies ese uye kuti wave uri iwo protagonists ekuchengetwa kwedu kwemakore mazhinji (muenzaniso wakajeka ndiBephantol), asi mumakore achangopfuura pakange paine maronda ayo, senge inks), shandisa zvimwe zvakasikwa uye zvishoma zvine hukasha zvinoshandiswa yeganda uye nyora.
Imwe yeaya matsva makirimu ari vegan mafuta izvo zvavanazvo chete zvishandiso zvakatorwa mumiti kana the cannabis-based cream, iyo kwete vane THC, zviri pamutemo zvachose uye zvinokurudzirwa. Ini pachangu, yekupedzisira ndiyo yandinoshandisa vane iyo ganda rakanyanya uye inoda kutarisirwa kwakawanda.
Parizvino pane mafuta akawanda anokwanisa kuporesa uye chengeta matatoo edu ari mupenyu uye akanaka panguva yekupora kwayo asi hatifanire kukanganwa kuti munyika dzakaita seSpain, kune mazuva mazhinji ane zuva pagore uye zuva rinogona zvinoparadza mukugadzira kwedu uye mavara, kamwe chete iyo tattoo yapora, saka hatifanire kukanganwa kushandisa mafuta ekudzivirira mukati memwedzi ine maawa akawanda ekupenya kwezuva sezvo ari iwo atinooneswa nemwaranzi yawo kwenguva refu.
Kuchengetedza uye kugadzirisa panguva kupora uye mushure
Kubva mumaonero angu, ndinokurudzira kuti, panguva yekurapa, a vegan kirimu (kune akawanda mabhureki pamusika) kubvira kuchengetedza uye hydrate ganda zvakanaka chaizvo uye havana hasha.
Kamwe kana tattoo yedu yapora, ini Ndichiri kushandisa kirimu imwechete kuichengeta Kana, mukati mechiratidzo chimwe chete, ndiri kutsvaga kirimu yakakosha mukuchengetedza iyo tattoo yakaporeswa.
Ndakaedza mabrandi ese matatu (Bharamu Tattoo, Leaf Pro y Vegan Tattoo) uye kwandiri vese vakanaka, izvo zvido zviri kumusoro kwemutengi. Vari zviri nyore kwazvo kuparadzira mafuta paganda, havandisiye inonamira y vanochengeta mavara ari mupenyu kunge nyowani kunze kweiyo studio.
Chero kirimu chinhu makumi mashanu kana + es sarudzo yakanaka kwazvo kuchengetedza nzvimbo yakatemwa, asi mabhureki ayo anopa makirimu ekuchengetedza matato zvakare vanowanzo tengesa sunscreen zvimwechetezvo nemasikirwo akasarudzika uye akasarudzika ekudzivirira nyora.
Aya mafuta ekuzora zuva ndiwo andakashandisa uye akandishandira chaizvo. Ndakachengeta nyora akadzivirirwa maawa akawanda, havaendi nemvura kana ndikaenda kumahombekombe kana kudziva e ivo vanonyorovesa iwo tattoo reganda kwazvo.
Dzimwe nzira dzekudzivirira
Chekupedzisira, ndikuudze kuti hapana marukisi chete ekudzivirira matatoo, tinogona zvakare kuwana dzimwe nzira dzisinganyatsooneka dzekuchengeta dzakadai maoko enhema kwemaoko nemakumbo asi ini handisati ndasangana nemunhu anopfeka mhando yekudzivirira iyi.
Zvisinei, ndinovimba wakafarira chinyorwa chekutanga ichi chandinonyora uye ini ndakamirira makomenti ako.
Mifananidzo: Webhusaiti yako pachako uye Creative Commons.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kunyora » Tattoos » Ndingaite sei kuchengeta nekutarisa nyora yangu?
Kutenda nyora, ako akadzika manzwiro paganda rako